सरकारले कोइराला निवासबाट सुरक्षाकर्मी हटायो - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > सरकारले कोइराला निवासबाट सुरक्षाकर्मी हटायो
June 2, 2019 June 2, 2019 GRISHI482
विराटनगर । सरकारले विराटनगरस्थित कोइराला निवासबाट सुरक्षाकर्मी हटाएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समेत निवासमा २०५४ सालमा सशस्त्र प्रहरीको टुकडी तैनाथ गरी सुरक्षाकर्मी राखिएको थिययो ।
तर, गत बिहीबारबाट सुरक्षाकर्मीहरु एक्कासि हटाइएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले बताए । उनले भने, ‘‘यसबारे डा. शेखरले गृहमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराउनु भयो तर सुनुवाई भएन ।’’ सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुँदा सुरक्षित मान्ने गरिएकोमा उनीहरु हटेपछि ऐतिहासिक धरोहर मानिएको कोइराला निवास ‘असुरक्षित’ भएको थपलियाले बताए ।
सधै खुला हुने निवासमा विहीबार पहिलो पटक चाबी लागेको छ । सामानहरु जस्ताको तस्तै राखिएको सामान चोरी होला वा के होला ? भन्ने चिन्ता थपिएको बताइएको छ । थपलियाले भने, ‘‘मैले आफैं पनि आइजीपीसँग सानो समूहमा भएपनि सुरक्षाकर्मी राख्न सकिँदैन भनेर जिज्ञासा राखे ।’’ २०५४ सालमा पछाडिबाट माओवादीले बम हानेपछि कोइराला निवासमा सुरक्षार्थ सुरक्षाकर्मी राखिएको थियो । त्यहाँ सुरक्षाकर्मी बस्न क्वाटर तथा अलग्गै भान्साको समेत व्यवस्था थियो ।
सशस्त्र प्रहरीका असइको नेतृत्वमा एक दर्जन सुरक्षाकर्मी निवासको सुरक्षामा खटिएका थिए । निवास अवलोकन गर्न देशका विभिन्न भागबाट दैनिक ठूलो संख्यामा मानिसहरु पुग्छन् । निवास परिसरमा टिनको दोमल्ले घर छ । भाटाको बेरामा माटोले लिपपोत गरिएको छ । आकर्षक फूलबारी छ ।
यहीँबाट पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाले राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरलाई जनताको वास्तविक अवस्था देखाउन फाटेको भोटो पार्सल गरेर पठाएका थिए । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र समाज सुधारको बिगुल यहीँबाट फुकिएको थियो । उनका तीनवटै छोरा मातृका, वीपी र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्री भए ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला र त्यसपछि डा. शेखर निवासमा आएर राजनीति विषयमा महत्वपूर्ण विषयमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्ने चलन अहिले पनि छ । पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया र सम्वाद निवासमै हुन्छ । पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाको नासोको रुपमा रहेको विराटनगरको कोइराला निवास भने सन्तानहरुमा अंशबन्डा भएपछि भने केही खुम्चिएको छ । दक्षिणपट्टीको आफ्नो भागमा परेको ८ कठ्ठा जमिन बीपी पुत्रहरु प्रकाश, डा. शशांक, श्रीहर्ष र छोरी चेतनाले बिक्री गरेपछि त्यहाँ नयाँ व्यापारिक भवन निर्माण भएका छन् । उत्तरपट्टीको जग्गा तारिणीप्रसाद कोइरालाको भागमा परेको थियो । जसमध्ये केही जग्गा छोरा ज्योतिले बिक्री गरिसकेका छन् ।
पूर्वपट्टिको जमिन गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी सुपुत्री सुजाताको भागमा परेको छ । यसको चार कठ्ठा जग्गा जीपी फाउन्डेसनलाई दिएर त्यहीँ भवन निर्माण गरिएको छ । पुरानो निवास रहेको क्षेत्र केशव पुत्रहरु डा. शेखर र निरञ्जनको भागमा परेको छ, जुन यथावत् छ ।
नेयमारलाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप